Home > Blog > Fankatoavana ny mpanjifa
Ahoana ny fomba hanaovana sarontava fandidiana？ Fanasokajiana ny masinina saron-tava
PTJ Shop dia manana mpanjifa manampahaizana manokana amin'ny fanaovana masinina sarontava, ary ny PTJ Shop dia manome azy ireo masinina cnc ny masinina masinina masinina. Masinina manao bontolo misaron-tava servisy, Masoara any ivelan'ny masinina fanamafisam-peo, Flitter maska ​​fanaovana maska, Duckbill maska ​​fanaovana maska ​​sns. .,
Fanomezana milina Cnc milina mafana ho an'ny mpanjifa Maleziana
PTJ Shop dia fivarotana milina tsara eo an-toerana. Izy ireo dia manana fahaiza-manao marobe avy amin'ny fikosoham-bary, fihodinana, EDM, fivoriambe, ary maro hafa. Izy ireo dia mety tsara amin'ny tetikasa rehetra ao anatin'izany ny asa be loatra noho ny sela famokarana. Vondrona lehibe hiara-miasa amin'ny manodidina! Miresaha amin'i David na Michelle.
Israel Toolings GB sy talen'ny milina Corning tonga ao amin'ny PTJ Cnc Machining Factory
Nampiasa PTJ Shop tsindraindray izahay nandritra ny 10 taona ary tsy mbola nanana olana lehibe tamin'izy ireo. Tonga ara-potoana sy mamaly foana izy ireo. Ny fotoana iray izay nanananay olana kely dia nanatanteraka ny fampanantenany izy ireo ary namerina ny faritra rehetra. Mpamatsy tsara ny Toolings GB izy ireo.
Serivisy fanodinana milina Humen CNC, mankany Mexico
Ny fanjakan'izy ireo amin'ny milina zavakanto, ny asa-tanana kalitao ary ny fiheverana ny antsipirihany dia tena nanampy tamin'ny famitana ny tetikasako ho amin'ny dingana manaraka. Tena nahavariana ahy ny ekipa PTJ, samy nanana ny fahalalana sy mora niara-niasa ny rehetra.
PTJ Shop Precision Custom Medical faritra ho an'ny mpanjifa Japoney
PTJ Shop dia orinasa lehibe iaraha-miasa. Ampiasainay izy ireo amin'ny fotoana rehetra ilainay ny milina fanaingoana ny prototypes izay iasantsika, tena mamaly sy manampy tokoa izy ireo.
CNC Machining Automotive Wheels Hub Ho an'ny mpanjifa Alemanina
Ny foiben'ity kodiarana fiara ity dia namboarin'ilay PTJ Shop ho an'ny mpanjifa alemanina. Ny fitaovana dia aliminioma ary ny fitsaboana eo an-toerana dia tena oksidana, izay afaka miantoka 10 taona tsy misy fiovan'ny volony, ary neken'ny mpanjifa izany.
Real Shot Cnc Machining LED jiro trano fanariana
Ny famoahana an'io jiro lehibe io dia napetraky ny PTJ Shop ho an'ny mpanjifa Tiorka. Ny fitaovana dia aliminioma ary ny fitsaboana eo an-toerana dia tena oksidana, izay afaka miantoka 10 taona tsy misy fiovan'ny volony, ary neken'ny mpanjifa izany.
Prototype haingana: ohatra 3D-pirinty PTJ Engineering vita amin'ny plastika tsy mahazaka
Yinlong dia manamboatra haingana fitaovana maotina azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny serivisy fanontana 3D an'ny PTJ Shop
Tena voatifitra Cnc Machining LED jiro jiro fototra fanariana
Ny ampahany fototra amin'ity jiro jiro ity dia karakarain'ny PTJ Shop ho an'ny mpanjifa Tiorka. Ny fitaovana dia aliminioma ary ny fitsaboana eo an-toerana dia tena oksidana, izay afaka miantoka 10 taona tsy misy fiovan'ny volony, ary neken'ny mpanjifa izany.
Ny teknolojia milina 5-Axis dia mamaha ny olan'ny propeller ho an'ny mpanjifa any Frantsa
Nahita ny PTJ Shop tamin'ny alàlan'ny karoka Google ny mpanjifan'i Frantsa, ary nanontany ny mpiraki-draharaha avy any ivelany aminay raha afaka manao propeller marin-drano tsy mahazatra.
PTJ lasa mpamatsy milina cnc an'ny orinasa bobongolo eropeana fanta-daza
Tsikelikely, mitombo mitombo. PTJ dia teny an-dàlana, na dia sarotra aza izany, nefa mahazo tombony ihany koa. Tsy dia hoe PTJ mihombo hatrany ny tombom-barotra azontsika, tsara kokoa ny nahazoantsika fankatoavana sy fanohanan'ny mpanjifa bebe kokoa. Izany no ankasitrahanay. Mirehareha. Noho io antony io dia tsy maintsy miasa mafy isika hanompoana ny mpanjifa tsirairay.
Manome fanampiana ara-teknika struktural ho an'ny mpanjifa Okrainiana
Kairan dia tonga tao amin'ny PTJ Shop fanintelony mba hiady hevitra momba ny fametahana ny tetikasa cnc an'ny tetikasa. Raha te hisafidy mpamatsy fitaovana mety dia tena sarotra ny mandeha mandroso sy miverina eo amin'i Ukraine sy Sina.